Asa momba ny fitsaboana Proton mandroso - Oncology amin'ny taratra - Proton California
Fikarakarana kansera Proton Therapy any San Diego
Manisy fiovana isan-andro
Rehefa mitambatra ny sasany amin'ireo manam-pahaizana momba ny homamiadana za-draharaha eran'izao tontolo izao amin'ny sehatry ny fitsaboana proton miaraka amin'ny haitao mandroso sy mandroso, mahazo laser ianao mifantoka amin'ny famelezana homamiadana miaraka amina fepetra sy vokatra tsy mitombina. Avy amin'ny oncolojia malaza maneran-tany mankany amin'ny mpiasa ara-pitsaboana sy mpiasan'ny birao mahay izay manao ny foibenay, ny ekipan'ny fikarakarana marary dia miara-miasa ary amin'ny fangorahana mitondra fanantenana sy fanasitranana ho an'ny marary antsika isan'andro. Raha liana amin'ny toeram-pitsaboana amin'ny toeram-pitsaboana homamiadana ianao miaraka amin'ny ekipa mavitrika izay maniry ny hanampiana ny olona hiady amin'ny ampitso tsara kokoa, California Protons dia mety ho toerana ho anao.
Tokony hampiharina ny kandidà liana Eto.
Ny hamoaka na dia ireo kankana mahery vaika indrindra aza amin'ny alàlan'ny fikarakarana tsy manam-paharoa avy amin'ireo manampahaizana momba ny homamiadana malaza sy ny dokotera izay manao asa 50 taona mahery ary hampiasa ny teknolojia fitsaboana ara-teknolojia.
Isika dia tsy mahomby amin'ny fikarakarana sy ny fisolokiana
Tsy mihetsika izahay eo amin'ny fitadiavanay ny fanafody, ka mitondra ireo kansera sarotra indrindra
Izahay dia manamboatra fitsaboana an-dàlam-pamatsiana ho an'ny vondron'olona sy any ivelany
Izahay no isan'ny fitambaran'ny faritra misy antsika — dokotera, mpiasan'ny klinika ary mpikamban'ny orinasam-barotra. Amin'ny alàlan'ny hiara-miasa tsy misy fotony dia ahafahantsika manolotra ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fikarakarana ny homamiadana ny marary
Manolotra fikarakarana manokana sy mangoraka izahay, mitsabo ny marary tsirairay miaraka amin'ny haavo sy fiheverana mitovy amin'ny ataontsika raha toa ka mitsabo ny mpianakavy na ny namany
Ekenay ny anjara asantsika lehibe ao amin'ny fiarahamonina ary miasa tsy tapaka amin'ny fananganana sy hanatsarana ny fifandraisana izay ahafahanay manompo ny fiarahamonina sy mihoatra
Andraikitra ara-bola sy miasa
Mijanona ho mahatoky hatrany isika amin'ny fitazomana ny fandidiana tsy miangatra sy marina
California Protons dia manolotra fonosana tombontsoa mahasoa, ao anatin'izany ny karama mifaninana, fitsaboana, mpitsabo aretin-tsaina, fahitana, fiantohana aina, kilema fohy sy fotoana fohy, fandaniam-potoana fohy, fitoviana 401 (k), drafitra PTO manankarena, ary tombontsoa manankarena tokana.
Raha mahaliana anao ny hiditra amin'ny ekipam-pitombo amin'ny ekipan'ny California Proton dia ampiharo Eto.